3 ubugcisa beenkwenkwezi kubantwana | Oomama Namhlanje
UToñy Torres | 15/05/2021 20:00 | Ukuzonwabisa, Imisebenzi yezandla
Isibhakabhaka yindawo enkulu, indawo engenasiphelo ekumema ukuba uphuphe, yiyo loo nto abantwana benomdla kangaka ngeenkwenkwezi. Ababambalwa abantwana abavakalisa umnqweno wabo wokuba ngusomajukujuku, kuba ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba nethuba lokwazi isithuba yinto engenakuthelekiswa nanto, ekufikeleleni kwabambalwa kakhulu. Ukusondeza abantwana kufutshane nezulu, akukho nto ilunge ngaphezu kokwenza ubugcisa njengentsapho.
Namhlanje kubhiyozelwa umhla we-15 kuCanzibe Usuku lwehlabathi lweenkwenkwezi, ke ngekhe ufumane usuku olungcono lokwenza naziphi na kwezi projekthi nabantwana bakho. Ngezinye izinto ezihlaziyiweyo, uninzi lweengcinga kunye nomnqweno wokuzonwabisa njengentsapho, ungonwabela imvakwemini yobugcisa beenkwenkwezi kubantwana. UKUYA ngezantsi uzakufumana ezinye izimvo, kodwa ngokuqinisekileyo abantwana bakho abancinci baya kuza nezinye ezininzi.
1 I-Astronomy yabantwana
1.2 Iteleskopu eyenziwe ekhaya
1.3 Umzobo wokuhombisa igumbi
2 Eminye imisebenzi kwi-astronomy
Thatha eli thuba ufundise abantwana bakho enye into malunga neenkwenkwezi, malunga neenkwenkwezi, iinkwenkwezi, iiplanethi, ngokufutshane, isifundo sesayensi esimnandi sabantwana. Ungaqala ngayo nayiphi na kwezi ngcamango, kodwa njengezulu, ukhetho alupheli. Ungalibali ukundwendwela icandelo lobugcisa Oomama Namhlanje, kuyo uyakufumana ezinye izimvo ezininzi, amalinge enzululwazi kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo zokonwabela i-astronomy nabantwana.
Kukho amaqela eenkwenkwezi angama-88, onke ahlukile kwaye ngalinye linegama lalo. Mhlawumbi abantwana bakho bayazazi ezinye, ezili-12 ezingqinelana neempawu zodiacac. Unokuthatha ithuba lokuchaza ngakumbi malunga neenkwenkwezi, ukongeza ekubabuyiseleni ngale ndlela isityebi. Ngezixhobo ezibini ezityebileyo nekulula ukuzifumana, ungenza (kwaye utye kamva) ngamakroza.
Izinti ezinetyuwa uhlobo lwe-pretzel
Khangela i-intanethi ngamakroza, uprinte ukuze kube lula ukuphinda uphinde uphinde wenze indawo kunye nabantwana. Ungaqala ngeempawu zodiacos yosapho, ukuze uchaze enye into malunga nesi sihloko enomdla kakhulu kulutsha nakwabadala.
Iteleskopu eyenziwe ekhaya
Ukuze ukwazi ukujonga iinkwenkwezi, iinkwenkwezi okanye iiplanethi, udinga iteleskopu. Ukwenza eyasekhaya enye yabantwana kulula kakhulu. Uya kudinga ezi zinto zilandelayo.
2 iityhubhu zekhadibhodi ubukhulu obahlukeneyo, enye inokusetyenziselwa iphepha lasekhitshini kunye nephepha langasese
iiglasi ezimbini ezinkulu ubungakanani obahlukeneyo
Umhlangano weteleskopu ulula kakhulu, kufuneka ubeke iiglasi ezenza nkulu kwiityhubhu zekhadibhodi ezinamathelisi okuncamathisela. Joyina iityhubhu ezimbini, iglasi encinci yokukhulisa yeyona isebenza njengombukeli kwaye enkulu inokuba isiphelo malunga. Kwaye u-voila, sele unayo iteleskopu eyenziwe ekhaya, ihlala isogquma ngekhadibhodi kwaye uyihombise ngemizobo, ubumenyemenye okanye njengoko abantwana bekhetha.
Umzobo wokuhombisa igumbi
Into emnandi malunga nemizobo yile zinokuqulatha izinto ezininzi kangangoko ufunaKule meko, banokuba ziiplanethi, iinkwenkwezi, iinkwenkwezi kunye neerokethi zesithuba. Obu bubugcisa obugqibeleleyo bokuvumela abantwana baphonononge ubuchule babo, babone ukuba bacinga ukuba isibhakabhaka sinjani kwaye bathathe ithuba lokufumanisa okungakumbi malunga neenkwenkwezi.
Izinto ezinokwenziwa zinokwahluka njengoko ufuna kwaye ungachitha iintsuku ezininzi usenza olu daba lonwabisayo. Uya kudinga ikhadi elikhulu elimnyama, inkulu njengokuba ufuna ukuze abantwana babenendawo eninzi yokusebenza. Baza kufuna amanye amakhadi amancinci, anemibala eyahlukeneyo. Iphepha elihombisayo, amakishayo, isikere kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo.
Eminye imisebenzi kwi-astronomy
Ukongeza ekwenzeni ubuchwephesha beenkwenkwezi kunye nabantwana, unokujonga eminye imisebenzi abanokuthi bafunde ngayo izinto ezinomdla kakhulu malunga nendawo. Kwi-intanethi uya kufumana zonke iintlobo ze izixhobo zemfundo kunye nezixhobo ukuze abantwana bafumane okuninzi malunga neenkwenkwezi. Ungaququzelela uhambo oluya kwiziko leplanethiyamu okanye kwimyuziyam yesayensi.
Abantwana baya kukuvuyela ukufunda, Ukufumanisa ukuba zeziphi iinkwenkwezi, iiplanethi ezahlukeneyo, iinkwenkwezi kunye nayo yonke into engakholekiyo kunye nomlingo owenza isibhakabhaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » Ukuzonwabisa » 3 ubugcisa beenkwenkwezi kubantwana
Unyana wam kufuneka anciphise umzimba, ndingamnceda njani?